राजपालार्इ आधा दर्जन अध्यक्ष - व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो ! - Everest Dainik - News from Nepal
राजपालार्इ आधा दर्जन अध्यक्ष – व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो !
काठमाडौं, चैत २५ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका ६ जना अध्यक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ ।
खासगरी महाधिवेशनपछि ६ जना अध्यक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
पार्टीको पहिलो महाधिवेशन आगामी कात्तिकमा गर्ने तयारी पार्टीका नेताहरुले गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस राजपामा टिकट वितरणमा चर्को असन्तुष्टी, उपाध्यक्ष र महासचिवद्वारा पार्टी परित्याग
आगमी बैशाख ८ गते बस्ने राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले महाधिवेशनको तिथि तय गर्ने पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
अध्यक्षमण्डल बनाई चलेको पार्टीमा हरेक निर्णय ६ जनाको बैठकमा हुने गरेको छ ।, आजको नागरिकमा यो खबर छ ।